China 6 dura impedance kudzora yakaoma-flex bhodhi ine stiffener vagadziri uye vanotengesa | Kangna
6 dura impedance kudzora yakaoma-flex board ine stiffener
Chinyorwa mhando: FR-4, polyimide
Min mugomba saizi: 0.15mm
Finished bhodhi ukobvu: 1.6mm
FPC ukobvu: 0.25mm
Solder mask ruvara: tsvuku
Lead nguva: Mazuva makumi maviri
Kuberekwa uye kukura kweFPC nePCB kwakazvara chigadzirwa chitsva cheyakaomarara -flex bhodhi. Naizvozvo, muPCB prototyping, inochinjika redunhu bhodhi uye yakaomarara bhodhi inosanganiswa pamwechete zvinoenderana neyakakodzera tekinoroji zvinoda mushure mekutsikirira nedzimwe nzira dzekuumba redunhu bhodhi ine FPC hunhu uye pcb hunhu.
MuPCB prototyping, musanganiswa weyakaomarara bhodhi uye FPC inopa yakanakisa mhinduro mune mashoma nzvimbo mamiriro. Iyi tekinoroji inopa mukana wekuti ubatanidze zvakachengeteka zvigadzirwa zvemidziyo uchiona kuverengera uye kugadzikana kwekubata, uye kunoderedza huwandu hwepulagi uye yekubatanidza zvinhu.
Mamwe mabhenefiti eakaomarara_flex bhodhi ane simba uye kugadzikana kwemuchina, zvichikonzera 3d dhizaini rusununguko, kuiswa kwakareruka, kuchengetedza nzvimbo, uye kugadzirisa yunifomu magetsi maitiro
Vanachandagwinyira-Flex pcb nhema nhema Applications:
Rigid-Flex PCBs dzinopa akasiyana mafomu ekushandisa, kubva pane akangwara zvigadzirwa kusvika kumaserura uye kamera dzemadhijitari. Kuwedzera, kuomarara-kusimba bhodhi yekunyepedzera kwave kushandiswa mune zvekurapa zvishandiso senge pacemaker yenzvimbo yavo uye kurema kudzikisira kugona. Iwo iwo mabhenefiti eakaomarara-anoshandura pcb mashandisirwo anogona kushandiswa kune smart kutonga masisitimu.
Muzvigadzirwa zvevatengi, kuomarara-kushanduka hakungogadziri nzvimbo uye huremu asi kunovandudza zvikuru kuvimbika, kubvisa zvakawanda zvinodiwa zvekubatanidza sisitimu uye isina kusimba, wiring isina kusimba iyo inokombamira kuhukama nyaya. Iyi ingori mimwe mienzaniso, asi Rigid-Flex PCBs inogona kushandiswa kubatsirikana angangoita ese epamberi emagetsi maficha anosanganisira kuyedza michina, maturusi uye mota.
Vanachandagwinyira-Flex pcb Technology uye Production Maitiro:
Kunyangwe ichiburitsa chakasimba flex prototype kana kugadzirwa kwehuwandu kunoda hukuru hwakakomba Rigid-Flex PCBs nhema uye gungano rePCB, tekinoroji iyi inoratidzwa zvakanaka uye yakavimbika. Iyo inoshanduka pcb chikamu chinonyanya kukosha mukukunda nzvimbo uye huremu nyaya ine nzvimbo yemadhigirii erusununguko.
Kunyatsotarisirwa kweRigid-Flex mhinduro uye kuongororwa kwakakodzera kwesarudzo dziripo pamatanho ekutanga mune yakaoma-flex pcb dhizaini dhizaini inodzosera zvakakosha. Iwo Rigid-Flex PCBs anogadzira zvinhu anofanirwa kuve achibatanidzwa pakutanga mukugadzirwa kwemaitiro kuti ave nechokwadi chekuti dhizaini uye zvikamu zvezvinhu zviri zviviri mukubatana uye nekuzvidavirira kwekupedzisira kwechigadzirwa.
Iyo Rigid-Flex yekugadzira chikamu iri zvakare yakaoma uye inotora nguva kupfuura kuomarara bhodhi nhema. Zvese zvinoshanduka zvinoriumba zveRigid-Flex gungano zvine zvakasiyana zvachose kubata, etching, uye soldering maitiro pane akaomarara FR4 mabhodhi.
Zvakanakira Rigid-Flex PCBs
• Zvido zvepakati zvinogona kuderedzwa nekushandisa 3D
• Nekubvisa kudiwa kwekubatanidza netambo pakati pezvikamu zvakaomarara, bhodhi saizi uye huremu hwese uremu hunogona kudzikiswa.
Nekuwedzera nzvimbo, panowanzo kuverengeka kwakaderera muzvikamu.
• Majoini mashoma easolder anovimbisa yakakwira kubatana kutendeseka.
Kubata panguva yekuungana kuri nyore kana tichienzanisa nemabhodhi anochinjika.
• Yakareruka pcb gungano maitiro.
• Yakabatanidzwa ZIF kutaurirana inopa akareruka modular masisitimu kune iyo system nharaunda.
Mamiriro ekuedzwa akareruka. Muedzo wakazara usati waiswa wagoneka.
Mari yekushandisa uye yegungano yakadzikiswa zvakanyanya neRigid-Flex board.
• Izvo zvinokwanisika kuwedzera kuomarara kwemakanika dhizaini, iyo zvakare inovandudza mwero werusununguko rwekugadziriswa kwemisha mhinduro.
Cisu tinoshandisa FPC kutsiva rakaomarara bhodhi?
Anochinjika wedunhu mabhodhi anobatsira, asi haasi kuzotsiva akaomarara ematunhu emabhodhi kune ese maficha. Mutengo wakakosha chinhu,. Rigid redunhu mabhodhi haadhure kugadzira uye kuisa mune chaicho choga chihombe-vhoriyamu yekugadzira nzvimbo.
Kazhinji, mhinduro kwayo yechigadzirwa chitsva ndeye inosanganisa inochinja masekonzi pazvinenge zvichidikanwa uye inoshandisa yakasimba, yakavimbika mabhodhi edunhu akasimba pazvinogoneka kuti mitengo yekugadzira neyegungano iderere.
Pashure: Mutete Polyimide bendable FPC pamwe FR4 stiffener
Zvadaro: Resin plugging gomba Microvia Kunyudza sirivheri HDI ine laser kuchera
Mutete Polyimide bendable FPC pamwe FR4 stiffener
yekumhanya multilayer Yakakwira Tg Bhodhi nekunyudza enda ...
anokurumidza dzoka kumumvuri goridhe yakanamirwa pamifananidzo PCB pamwe Coun ...
8.0W / mk mukuru chafariz conductivity MCPCB nokuda El ...